La kulan – Nin 4,000 Shinbiro ah quudiya maalin kasta. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Uncategorized, Wararka September 12, 2017	0 166 Views
Delhi (Himilonetwork) – 64-jirka lagu magacaabo Sekar wuxuu ku qaatay in loogu yeero ‘Shinbiroolaha Chennai’ deeqdiisa haqab-tiraysa kumaankunka shinbiraha parakeets-ka la yiraahdo. Maalin kasta wuxuu qabtaa kulanti ay iskugu yimaadaan 4,000 oo shinbiro ah gurigiisa ku yaalla Chennai, dalka Hindiya.
Next: Singapore oo dooratay Muslimaddii ugu horreysay oo Muxajabad ah.
Sana Khan oo Ilaahay dartiis isaga joojisay jilidda aflaamta.